12 / 07 / 2015 | RayHaber | raillynews
Maalinta: 12-ka July, 2015
Iskaashiga Ingiriiska ee mashruuca tareenka ee Maraykanka
Wehelka Ingiriiska ee mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee Mareykanka: Shirkadda Ingiriiska ee Rail Parsons waxaa lagu daray mashruuca uu hoggaamiyo Brinckerhoff. Kooxda waxaa loo aasaasay inay ka shaqeeyaan mashruuca tareenka xawaaraha sare ee heer sare ee California (CHSRA). chsra ah [More ...]
Nidaamka Tareenka ee Bursa Görükleye ayaa soo socda: Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa ee Magaalada Görükle oo ay soo qaban qaabisay Duqa Magaalada Metro Recep Altepe ayaa sheegtay in nidaamka tareenka uu sida ugu dhaqsaha badan u gaari doono gobolka. Waxaa abaabulay Dowlada Hoose ee Magaaladda Görükle [More ...]
Shaqada ayaa bilaabay mashaariicda Konak Tramvayı
Shaqada waxay bilaabatay Konak Tramway: Waxaa la joogaa waqtigii Konak uu bilaabi lahaa mashruucyada xadiidka tareenka ee 390 km ay xaqiijisay degmada İzmir ee Magaalo Weyn iyadoo la maalgelinaayo 22 milyan TL. Bishii Abriil Karşıyakaoo ku dhuftay kii ugu horreeyay [More ...]
323 million deyn ah oo loogu talagalay mashruucyada taraamka ee Poland
323 milyan zloty amaah ah oo loogu talagalay mashaariicda taraamka Poland: Bangiga maalgashiga Yurub wuxuu ogolaaday inuu deyn siiyo amaahda mashaariicda taraamyada Poland. Intii lagu guda jiray wareysiyada, waxaa la fahmay in 2 uu siin doono amaahda kaladuwan mashaariicda iyo [More ...]
Boqolkiiba 90 ee Mashruuca Tunniinka Eurasia ayaa la soo gabagabeeyey: Dhamaadka EURsia Tunnel, oo isku xidhi doona qaaradda Aasiya iyo Yurub markii ugu horraysay, ayaa gaadhay dhamaadka. Goztepe-Kazlıçeşme inta u dhaxaysa daqiiqadaha 100 illaa daqiiqadaha 15 [More ...]
Safarka Jacaylka leh ee Orient Express
Safarka Jacaylka ah ee Orient Express: Waxaan xidhnaa dharkeenna ugu quruxda badan waxaanan ku dul soconaa rooga guduudan waxaanan degnaa baabuurta Orient Ekspres. Daaqadaha ayaa furan. Dhaarta dabaysha Safarkan noocan ah [More ...]
Tareennada Serbian-ka Oo La Cusbooneysiiyay
Jidadka tareenka ee Serbian ayaa cusbooneysiinaya: Waddada tareenka ee Serbian Zeleznice Srbije ayaa ku dhawaaqday in dib u dhiska qaar ka mid ah tareennada gudaha ay bilaaban doonaan bisha Luulyo kadib marka ay dowladdu ogolaato 15. Shirkadda 4 ayaa la wareegtay nidaamka qaabeynta. Iyadoo la raacayo, mashruuca [More ...]
Diyaarinta Diyaarinta Kardemir
Diyaarinta Dekadda waxaa laga keenay Kardemir: Mesut Uıur Yılmaz, Maareeyaha Guud ee Iron Iron Karabük Iron iyo Iron (kardemir) A.Ş, ayaa yiri, alan Meesha aan kuligeen la halgameyno waa in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hirgaliyo Port ama Port. [More ...]
Tareennada Budapest waa kuwo casri ah: ku guuleystaha hindisada hannaanka casriyeynta ee gaari xNUMX ee adeegga ee Budapest ayaa la shaaciyey. Shirkadda Russia ee Metrovagonash ayaa ku guuleysatay qandaraaska, taasoo ka tagtay shirkadda kale ee 222. Heshiiska, 6 [More ...]
Dabka Dabagalka Wagon
Dabka Wagon tareenka: Dab ayaa ka kacay markabkii ugu dambeeyay ee tareenka qaada dhuxusha ee Batman .. Tareenka xamuulka qaada ee ka yimid Siirt Kurtalan kuna sii jeedda Diyarbak passedr wuxuu dhex maray Batman sabab aan la shaacin. [More ...]
Maanta taariikhda: 12 July 1915 Laanta Masaarida ee Xuduudka Hejaz intii lagu jiray Dagaalkii Dunida I
Taariikhda Maanta War 12 World 1915 July I. Inta lagu jiro Hejaz Railway laanta Masar Mesudiye-Birüsseb in (164 km), Birüsseb to-Hafi-retü'l-Avci (ka 72 km.), Lidar-Birüsseb A (96 km) qaybood ujeedooyinka militeri Waxaa la sameeyey.